एडोब फोटोशपको साथ PNG छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
अवस्थित फरक छवि ढाँचाहरूको बारेमा केही आधारभूत धारणाहरू हुनुपर्दछ र कसरी छविलाई एक ढाँचाबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक छ यदि तपाईं आफ्नो डिजाइनहरू सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने। ग्राफिक डिजाइनमा PNG सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ढाँचाहरू मध्ये एक हो, यसैले मलाई लाग्छ कि टी लाई जान्नु महत्त्वपूर्ण छछवि बदल्नुहोस् जेपीईजी, ढाँचा जसमा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने प्रायः सबै PNG मा छन्। यो गर्न Adobe Photoshop एक उत्तम उपकरण हो र यो ठ्याक्कै एक चीज हो जुन मैले तपाईंलाई यस पोष्टमा सिकाउनेछु।
जब हामी भन्छौं कि हामी PNG छविहरू सिर्जना गर्न चाहान्छौं, मलाई थाहा छ कि तपाईं मध्ये धेरैजना ढाँचा परिवर्तनको मतलब मात्र हुनुहुन्न, तर तपाईं चाहानुहुन्छ पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ छवि कसरी बनाउने सिक्नुहोस्। यस पोष्टमा म यसलाई फोटोशपमा कसरी गर्ने भन्ने बारे सरल ट्यूटोरियल पनि सामिल गर्दछु। जे होस्, यस विषयमा जान्नु अघि मँ PNG वास्तवमा के हो र यो ढाँचाले के फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न रोक्छु।
1 PNG छवि के हो?
1.1 हामीले कहिले यो ढाँचा रोज्नु पर्छ?
2 एडोब फोटोशपको साथ PNG छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
2.1 छवि ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्
2.2 फोटोशपको साथ पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ छविहरू सिर्जना गर्नुहोस्
2.2.1 हामी छवि खोल्छौं
2.2.2 कसरी छनौट गर्ने
2.2.3 पृष्ठभूमि कसरी हटाउने
2.2.4 बचत गर्दा होशियार रहनुहोस्
PNG छवि के हो?
PNG एक फाईल ढाँचा हो जसले अनुमति दिन्छ घाटा बिना ग्राफिक जानकारी कम्प्रेस गर्नुहोस्, भन्नुको मतलब सैद्धान्तिक रूपमा कम्प्रेसनमा मूल असम्पीडित छविको विवरण हराउँदैन।
यो ग्राफिक डिजाइनको लागि धेरै आकर्षक ढाँचा हो किनभने यो जेपीईजी फाइलको जस्तो व्यवहार गर्दछ, कम्तिमा मेरो जस्तो अनुभवहीन आँखामा, यो कूल १ million करोड रंगहरू भण्डारण गर्न सक्षम छ र यसले मौलिक लाभ प्रदान गर्दछ: पारदर्शी पृष्ठभूमि समर्थन गर्दछ.
हामीले कहिले यो ढाँचा रोज्नु पर्छ?
यो ढाँचा, वेब को लागी बनाईएको हो आदर्श यदि हामी चित्रहरु संग काम गर्न जाँदैछन् वा यदि हामी वेबसाइटहरूको लागि सामग्री डिजाईन गर्दैछौं जुन राम्रो रिजोलुसन कायम गर्न आवश्यक छ, जस्तै लोगो। यो फोटोमन्टेजहरू सिर्जना गर्नका लागि उपयोगी ढाँचा पनि हो, कोलाज र पोस्टरहरू।
एडोब फोटोशपको साथ PNG छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
छवि ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि हामी जे चाहन्छौ भने, केवल JPEG मा रहेको छविको ढाँचा परिवर्तन गर्न, प्रक्रिया धेरै सरल छ। तपाईंले चाहानु भएको छवि खोल्नुहोस् एडोब फोटोशपमा र राख्नुहोस् फाइल ट्याबमा कर्सर। मेनू प्रदर्शित हुनेछ, कर्सर छोड्नुहोस् विकल्प «निर्यात« र क्लिक गर्नुहोस् "PNG को रूपमा द्रुत निर्यात"। सेकेन्डमा तपाईंले PNG मा तपाईंको छविको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
फोटोशपको साथ पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ छविहरू सिर्जना गर्नुहोस्
हामी छवि खोल्छौं
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो छवि खोल्नुहोस् जुनबाट हामी पृष्ठभूमि हटाउन चाहन्छौं। एक पटक खोल्नुभयो, तपाईंले गर्नु पर्छ हामी के बचत गर्न चाहन्छौं छान्नुहोस् फोटो को, मेरो मामला मा दुई zebras। त्यहाँ असंख्य छन् Adobe Photoshop मा छनौट उपकरणहरू। म वर्णन गर्छु बाटो छनौट गर्नु मेरो लागि सजिलो छ यी अवस्थाहरूमा, तर सबै कुरा तपाई के चयन गर्न चाहानुहुन्छ र के तपाई सबैभन्दा प्रभावकारी ठान्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ।
एउटा छनौट गर्नुहोस् छनौट उपकरण कुनै, यसले केही फरक पार्दैन। जब तपाइँ त्यसो गर्नुहुन्छ, चयन विकल्पहरूको श्रृंखला पर्दाको शीर्षमा देखा पर्नेछ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ «विषय चयन गर्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्, Photoshop एक बनाउँछ स्वचालित चयन धेरै असभ्य, तर प्रायः उत्तम हुँदैन। चिन्ता नलिनुहोस्, ती सानो त्रुटिहरू सजिलैसँग समाधान हुन्छन्।
Subject विषय चयन गर्नुहोस् to पछाडि तपाईले यो देख्नु हुनेछ विकल्प «मास्क छान्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्»। एकल क्लिकको साथ तपाईंaमा जानुहुन्छ मोड तपाइँको छनौट सही गर्न को लागी डिजाइन गरीएको। उपकरण मेनूमा तपाईले बिभिन्न ब्रशेस देख्नुहुनेछ, त्यहाँ दुई उपकरणहरू छन् जुन मेरो लागि आवश्यक छ जब यो सुधारको लागि आउँदछ: Ed किनारा पूर्णको लागि ब्रश », कपाल संग काम को लागी आदर्श, र "ब्रश", तपाइँको छनौटबाट चाहानु भएको सामग्री थप्न वा हटाउन धेरै उपयोगी छ।
जब तपाईं चयन मास्क प्रयोग गर्नुहुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ "पारदर्शिता" सँग खेल्नुहोस्, ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं चयनमा समावेश गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाईं बाहिर निस्किनुहुन्छ। को प्रतीक "+" र ​​"-", पर्दाको शीर्षमा अवस्थित, ब्रशले चयनमा सामग्री जोड्दछ कि भनेर निर्णय गर्न प्रयोग गरिन्छ वा यसको विपरितमा, यसलाई घटाउँछ।
यी उपकरणहरूको फाइदा लिनुहोस्, सावधानीपूर्वक हुनुहोस् र किनारहरू राम्रोसँग चयन गर्न विस्तार गर्नुहोस्। जब तपाई जे देख्नुहुन्छ त्यसमा खुशी हुनुहुन्छ, "ठीक छ" थिच्नुहोस् र तपाईं सामान्य फोटोशप इन्टरफेसमा फर्कनुहुनेछ.
पृष्ठभूमि कसरी हटाउने
जाँच सही छ कि छैन, याद गर्नुहोस् यदि तपाईं अझै सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सँधै चयन मास्कलाई पुन: लागू गर्न सक्नुहुनेछ। जब छनौट गरिन्छ, तपाईंसँग गर्नु पर्दछ Ctrl + C र ctrl + V थिच्नुहोस् (यदि तपाइँ विन्डोजसँग काम गर्नुहुन्छ) वा आदेश + C र आदेश + V (यदि तपाईं म्याकको साथ काम गर्नुहुन्छ भने)। यसैले तपाईं पृष्ठभूमिमा तपाईंको चयन प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहुनेछ, तपाईले त्यो देख्नुहुनेछ नयाँ लेयर। अन्त्य सम्म, पृष्ठभूमि तह अनलक गर्नुहोस् र यसलाई हटाउनुहोस् तपाईंसँग पहिलै नै PNG मा तपाईंको पारदर्शी पृष्ठभूमि रहेको छ यसलाई तपाईंको डिजाइनहरूमा प्रयोग गर्नका लागि तयार छ!
बचत गर्दा होशियार रहनुहोस्
म तिमीलाई दिन चाहन्छु एउटा अन्तिम सल्लाह। जब तपाईं बचत गर्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं ढाँचा (PNG) राम्रोसँग छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं अर्को ढाँचामा बचत गर्नुहुन्छ, जस्तै JPEG, फोटोशपले तपाईंको छविलाई पूर्वनिर्धारित सेतो पृष्ठभूमिमा बचत गर्दछ र यसले तपाईंको लागि काम नगर्न सक्छ। म तिमीलाई दुई छोड्छु स्क्रिनसटहरू त्यसोभए तपाईं कसरी फाइल बचत गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशपको साथ PNG छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
उत्तम कपडाको ब्रान्ड लोगो र कसरी तपाइँको लोगो सिर्जना गर्ने